DEG DEG: Qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaraxa xoogan oo goor dhow ka dhacay isgosyka Dabka ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa lagu soo warramayaa in uu ahaa mid ka dhashay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, kaas oo ku qarxay agagaarka saldhigga degmada Booliska Waabari ee G/Banaadir.
Khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa jira, waxaana haatan socda gurmad ay fidinayaan gaadiidka Ambalaasta.
Waa qaraxii labaad oo magaalada Muqdisho ka dhacaya, iyadoona barqanimadii hore ee maanta gaari uu lahaa taliyaha nabad sugida qeybta Galmudug uu ku qarxay agagaarka Isgosya shaqaalaha dhanka degmada Hodan ee gobolka Banaadir
Somalia: 7 injured in car bomb explosion in Mogadishu